नेपालमै यो यस्तो गाउँ जहाँ सिङ्गो बस्ती नै तरकारी खेतीमा छ – Etajakhabar
नेपालमै यो यस्तो गाउँ जहाँ सिङ्गो बस्ती नै तरकारी खेतीमा छ
भीमदत्तनगर – कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–६ बालुवाफाँटामा अधिकांश किसान अन्नबाली छाडेर नगदेबालीका रुपमा तरकारी खेती गर्न थालेका छन् । तरकारीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि यहाँका किसान व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेतीमा लागेका हुन् ।
“राम्रो आम्दानीसँगै तरकारी खेतीले जिल्लामै किसानमाझ आफ्नो परिचय बनाइदियो ।” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले गाउँमै तरकारी खेतीको लहर चलेको छ ।” कुनै बेला आर्थिक अवस्थाले समस्या रहेको बताउँदै चौधरीले तरकारी खेतीबाट कमाइले धेरै सम्पति जोडेको बताउनुभयो ।
कृष्णपुर नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष नत्थुराम चौधरीले गाउँमा ५० प्रतिशत किसान तरकारी खेतीमा लागेको बताउनुभयो । “पहिले त धान गहुँमै जोड थियो ।” वडाध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “अहिले तरकारी खेती उचाइमा पुगेको छ ।” उहाँले किसानको प्रोत्साहनका लागि सरकार र स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २१, २०७५ समय: १५:२६:५९
एक्कासी ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य , हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?
बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ ,हेर्नुहोस् कुन देशको विनिमयदर कति ?
फेरी घट्यो सुनको मुल्य , हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?